kenduru inonhuwirira Vagadziri & Vatengesi - China inonhuhwirira kenduru Fekitori - Chikamu 4
tsika yekotoni wicks makenduru anonhuwirira
Kukura: D5.4CM * H7.3CM
Mini diki saizi inonhuhwirira zvipo makenduru
Uyu mukombe wepudding kenduru inonhuhwirira iri mini. Inogona kubata magiramu makumi matanhatu nemashanu esoni yakisi. Kwete chete yakasarudzika asi zvakare yakagadzirirwa kork, inova yakanaka uye inoshanda. Iyo ine matte mameseji, iwe unogona kusarudza iyo kara iwe yaunoda, uye silika-yakadhinda iyo logo iwe yaunoda. Iyo inokodzera kwazvo zvipo zvekusimudzira uye inotakurika kufamba.
Kukura: Dhayamita5.4CM * Kureba7.3CM
Ruvara: akawanda-mavara, tinoita OEM ODM
inopisa kutengesa kunhuwirira kenduru inonhuhwirira
Parafini wakisi girazi chirongo kenduru
Iyi kenduru ine dhizaini yakasarudzika, haina kunaka chete asiwo yakanaka. Chimiro chedhadha diki chinoita kuti kenduru regirazi riwedzere kunakidza. Kune hukuru hweiyi girazi inonhuhwirira kenduru kuti uwane zvaunoda zvakasiyana. Iyo idiki kwazvo saka unogona kuibata muruoko rwako. Unogona kuishandisa kushongedza kwepamba. Unogona kushongedza imba yako yekurara, kudzidza uye chero imwe nzvimbo yaunonzwa iwe yaunoda.
Muenzaniso: B04T B05T
Diki Saizi: D6.4CM * H7.9CM
Kukura Kwakakura: D6.9CM * H9CM
yakasarudzika yekushongedza soya wakisi makenduru anonhuwirira
Kukura: 8.8cm (Upamhi) * 8.5cm (Kureba)
Iyi kenduru yegirazi yeMason girazi ine polished maitiro uye idiki kwazvo.
Ivo akakwana ekuwedzera yekubata bata kune chero imba yekushongedza. Kana ichipisa, ivo vanozokanganisa kunhuwirira kunofadza mumhepo. Yakakwana pakushandiswa kwemazuva ese, muchato, zviitiko, aromatherapy, Spa, Reiki, Kufungisisa, Yekugezera marongero.
Muenzaniso: CB01P / CB02P / CB03P
Kukura: 8.8cm (Upamhi) * 8.5cm (Kureba) 7.1cm (Upamhi) * 10.4cm (Kureba)
9cm (Upamhi) * 11cm (Kureba)
Ruvara: Dzvuku, Bhuruu, tiudze kuti ndeupi muvara waunoda, isu tinogona kukuitira
frosted girazi kunhuhwirira kunhuwirira chimiro kenduru
Kukura: 7.1cm (Upamhi) * 10.4cm (Kureba)
Shongwe chimiro yakasikwa soya wakisi kunhuwirira kenduru
Iyi matte girazi Mason chirongo kenduru ichapa anopfuura maawa makumi matatu emaawa ekupisa nguva, uye kana yapera, kenduru Mason chirongo chiri nyore uye eco-inoshamisika inogadziriswazve girazi mudziyo.
Iri kenduru rinonhuwirira zvinoshamisa! Ndizvo chaizvo zvandiri kuda kuti imba yangu inhuhwe. Zvakafanana nekumbundira kunodziya. Zviri zvechokwadi wakanaka. Haisiyi chirongo chine rima noutsi semamwe makenduru, chinopisa zvakanaka.
tsika Yakashongedza Inonhuhwirira inonhuhwirira Kenduru kenduru
Makenduru anonhuwirira anoitirwa kuzadza nzvimbo yako nekunhuhwirira; isu takashandisa akakosha akakosha maoiri kuzadza mukamuri yako neakanaka anonhuwirira.
Yakagadzirwa newe nemhuri yako mupfungwa, iyi 100% Natural Soy wax kenduru haina chepfu, kupisa kwenguva refu, kunoitwa nemafuta anokosha akakosha uye ine 100% donje tambo.
Kukura: 9cm (Upamhi) * 11m (Kureba)
Ruvara: Girini, Yero, Bhuruu, nezvimwe.
chaiyo soya masoni chirongo inonhuhwirira kenduru
Ipa mharidzo sevhisi yekushongedza imba uye yemuchato
Iyo yemasoni girazi chirongo kenduru inoshandisa 100% yechisikigo soya wakisi, inova yakasununguka nharaunda uye isiri-chepfu. Inogona kubata 250 gramu yewakisi kuti iwe upise kwenguva yakareba. Mavara anogona kugadziriswa zvinoenderana nezvaunoda. Ruvara rwewakisi rwakasiyana zvakare zvichienderana nekunhuwirira kwaunosarudza, senge orenji, pinki uye nebhuruu. Inoita yakakwana chipo kushamwari, nhengo dzemhuri, kana iwe pachako.
Yakakwira mhando inonhuhwirira kenduru
Simba kana mwenje unonhuwirira unogona kuitwa zvinoenderana nezvinodiwa, kazhinji 1-10% inonhuhwirira. Aya makenduru e soya anonhuwirira ndiwo makenduru anoshamisa kwazvo anozivikanwa pamusika nhasi. Yemhando yepamusoro, makenduru akagadzirwa zvine hunyanzvi anotaridzika uye anonzwa kunakidza.
Kukura: 7.1cm (Upamhi) * 5.6m (Kureba)
<< <Yapfuura 123456 Inotevera> >> Peji 4/7